Iindaba ze Forex | Iindaba zeCrypto namhlanje | Phila imiqondiso ye-Forex
NgoLwesihlanu, ngoJanuwari 28, 2022
Umnqweno woMphathi weNgxowa-mali kuShishino lwe-Crypto ngo-2022
Umphathi weNgxowa-mali, umbhali, kunye nosomashishini we-serial uJames Altucher usanda kupapasha inqaku elifutshane malunga nokuba ulindele ntoni kwishishini le-crypto ngo-2022. , kunye nemali (crypto) ayifani. UAltucher uthi […]
I-EURJPY iyaqhubeka nokuhamba kwayo kweZigzag ukuya kwiNqanaba eliBalulekileyo le-127.630
Uhlalutyo lwexabiso le-EURJPY - NgoJanuwari 28 I-EURJPY iyaqhubeka nokunyakaza kwayo kwe-zigzag kwi-flag formation. Ixabiso liphinde labetha kumda ophezulu wephepha leflegi kwaye lisezantsi. Emva kokungabaza kancinci, imarike ngoku iye yehla ngaphantsi kwenqanaba lexabiso le-130.690. I-EURJPY iyaqhubeka nokuhla njengoko ngoku isondela […]
Ixabiso leBinance Coin (BNBUSD) Iinkunzi zeenkomo ziqokelela amandla ukuze zilawule iMarike
Uhlalutyo lwexabiso le-BNBUSD - Januwari 28 Ukunyuka kwesantya sabathengisi kuya kutyhala i-Binance Coin ukuba iphule inqanaba lenkxaso ye-364 yeedola ezinokuthi zinciphise ngakumbi kwi-$ 311 kunye namanqanaba e-$ 254. Ukungakwazi ukwaphula inqanaba lenkxaso ye-364 yeedola ngamabhere, i-BNBUSD iya kuqhekeza i-419 yeedola kunye ne-bullish trend […]
NgoLwesine, uJanuwari 27, 2022
Ixabiso leGolide liyehla kuMmandla oThengisiweyo, Ayinakwaphula i-$ 1,860 ephezulu
Amanqanaba okuchasana okuPhambili: i-$ 1,900, i-$ 1,950, i-$ 2000Amanqanaba eNkxaso aPhambili: i-$ 1,750, i-$ 1, i-700, i-$ 1,650 yegolide (XAUUSD) Ixesha elide leMzila: I-BullishGold (XAUUSD) ikwi-downtrend kodwa ayikwazi ukuphula i-$ 1,860 ephezulu. NgoJanuwari 25 uptrend; iinkunzi azikwazanga ukwaphula i-1,860 yeedola ezixhathisayo njengoko iGolide yagxothwa. Ngokufanayo, nge-17 kaNovemba, iGolide yachaswa kwi-Overhead resistance […]
IiRali ze-USDJPY eziya kwiNqanaba eliPhambili lokuchasa
Uhlalutyo lwexabiso le-USDJPY - NgoJanuwari 27 USDJPY i-ralies ngokubhekiselele kwindawo engundoqo yokumelana njengoko inqanaba le-112.700 lemfuno likhusela ukubuyisela kwakhona i-USDJPY. Imarike yaqhambuka ekudityanisweni ngo-Okthobha wonyaka ophelileyo. Uxinzelelo lokuthenga ludubule ixabiso kwi-111.950. Imarike ibuyele kwi-110.800. Emva kweentsuku ezimbini zokuphinda kukhangelwe, intengiso yenyuka […]
I-Dogecoin Ibambe ngaphezulu kwe-0.12 yeedola zenkxaso kodwa ilwa nokuchasa kwi-0.15 yeedola.
Amanqanaba okuchasana okuPhambili: $ 0.45, $ 0.46, $ 0.47 Amanqanaba eNkxaso ePhambili: $ 0.25, $ 0.20, $ 0.15 DOGE / USD Ixesha elide leMzila: Ixabiso le-BearishDogecoin (DOGE) liphantsi kwetshathi kodwa lilwa nokuchasana kwi-$ 0.15. I-altcoin izama ukuqalisa phezulu kodwa ivalwe kuluhlu. I-cryptocurrency iguquguquka phakathi kwe-$ 0.12 kunye ne-$ 0.15 amanqanaba exabiso. NgoJanuwari 26, […]
UMHLA / i-USD
Imeko yeMarike yeCrypto
Uya kuvumelana nam ukuba ixhala ithathe ulawulo cryptocurrency. Njengamaxesha onke, i-Bitcoin ilawula imarike. Ngaphandle kweempawu zokuchacha kwayo, isenokwehla. Ukuqhubela phambili iBitcoin inokunyuka ifikelele kwiindawo eziphakamileyo kulo nyaka. Inokuthi inyuke iye kuthi ga kwi-100,000 yeedola…….. Oku kunyuka kusenokuqhubela ezinye ii-cryptos ziye kubude obuphezulu. […]
IDola yase-US iphinde yafumana iNgxaki yeBullish eNgqongileyo ilandela iHawkish yase-US Fed Stance
I-dollar yase-US efunyenwe kwi-basket yezinye iimali eziphezulu ngoLwesine, ngokulandela izimvo ze-hawkish kunye nezicwangciso ze-US Fed Chair uJerome Powell kwintlanganiso ye-FOMC esanda kuqukunjelwa. I-greenback ithathe iinyanga ezimbini eziphezulu ze-1.1193 nge-euro kwaye ibanjwe kwi-115.06 phezulu kwi-yen, namhlanje ekuseni. I-USD iphinde yabetha […]
ISenator yaseNigeria ibiza ukuDalwa kweCryptocurrency Regulation
INdlu yoWiso-mthetho yaseNigeria ixoxa ngomthetho osayilwayo onokumisela iminyaka elishumi entolongweni kubasebenzi benkqubo ye-Ponzi, ilungu eliphambili leqela lase-Nigerian blockchain lobby, uSenator Ihenyen, ucele iNdlu ukuba icinge ngokuqulunqa umthetho wokulawula ishishini le-cryptocurrency. . Uye waphawula ukuba "indawo ye-crypto engalawulwayo ayikho […]
Iibhere ze-AUDUSD ziLawula iMakethi ukusuka kwi-0.72370
Uhlalutyo lwexabiso le-AUDUSD - NgoJanuwari 27 iibhere ze-AUDUSD zithatha uxanduva lwemarike ukusuka kwinqanaba elibalulekileyo le-0.72370. Ixabiso lenze umzamo onzima wokunyuka emva komhla we-3 kaDisemba, 2021. Imarike yenyuka ngaphezu kwenqanaba elilandelayo kwi-0.71050 kwaye inokubonwa ukuba ilandele umjelo. Okulandelayo […]
Konke kujongeka kulula, kodwa de ube ufumana umthengisi ombi kakhulu, kuxa uya kuqonda ukuba ukurhweba nge-forex ayisiyiyo ukuhamba epakini. Ukusebenza nomthengisi obalaseleyo we-forex kuya kugqiba ukuba ungaphumelela njani kwintengiso. Into enomdla kukuba, kukho abathengisi abaninzi abakhoyo, phantse bonke besithi "zezona zibalaseleyo." Nangona kunjalo, ayizizo zonke ezihambisa izithembiso zazo okanye ngokulula oko babanga ukuba banikezela. Ke ngoko, kufuna ukuba uhambe umgama ongezelelweyo ukuze uchaze ukuba yeyiphi i-broker yeyona ilungileyo kwiimfuno zakho.
Benza njani abaRhwebi ukuba bazazi iiStock zokuTyala imali?
Wonke umntu unokukhetha, kwaye xa kufikwa kumdlalo okhohlisayo wokutyala imali kunye nokuthengisa, akukho mahluko. Ukuba uphume uyokufuna iingcebiso kwistokhwe oza kutyala kuso, uya kuthi ufumane uninzi lwazo ngengcali nganye enika isizathu sokhetho lwayo. Kodwa umbuzo umi, Njani abathengisi bakhetha isitokhwe esifanelekileyo sokutyala imali?
Ukuhlaziywa kokugqibela: Epreli 27th, 2020